Sida Loo Xullo Shirkad Hormarinta App-ka Tooska ah | Martech Zone
Toban sano ka hor, qof kastaa wuxuu rabay inuu yeesho gees yar oo internetka ah oo leh degel loo habeeyay. Qaabka ay isticmaaleyaashu ula falgalaan internetka ayaa u beddelaya aaladaha mobilada, barnaamijkuna waa waddo muhiim u ah dhowr suuq oo toosan oo ay kula macaamilaan adeegsadayaashooda, kor ugu qaadaan dakhliga, una horumariyaan sii-haynta macaamiisha.
A Warbixinta Kinvey iyada oo ku saleysan sahan lagu sameeyay CIO-yada iyo Hogaamiyaasha Mobilada ayaa lagu ogaaday in horumarinta dalabka moobaylku yahay qaali, gaabis, iyo jahwareer. 56% hogaamiyaasha mobilada ee la daraaseeyay waxay sheegeen in 7 bilood ilaa in kabadan hal sano ay ku qaadanayso sameynta hal app. 18% waxay yiraahdaan waxay ku bixiyaan $ 500,000 illaa $ 1,000,000 halkii barnaamij, celcelis ahaan $ 270,000 halkii barnaamij
Shirkada horumarinta saxda ah waxay sameyn kartaa ama jebin kartaa guusha barnaamijka, taas oo ka dhigeysa xulashada midda saxda ah inay qayb muhiim ah ka noqoto geedi socodka. Uma baahnid inaad ahaato injineer softiweer ah si aad u gaarto go'aanno aqoon u leh shirkadda horumarineed ee ku habboon mashruucaaga. Waa kuwan qaar ka mid ah hababka ugu fiican ee ay tahay inaad tixgeliso markaad la kulanto bixiyeyaasha mustaqbalka.
Shirkaddaadu Ma Bixin Kartaa Waxaad U Baahan Tahay?
Shirkad karti leh, khibrad leh ayaa leh boortofooliyo weyn. Xitaa ka sii wanaagsan - waxay leeyihiin faylalka faylalka oo leh waxyaabo la xiriira fikraddaada barnaamijka. Qoraal wanaagsan oo aad adigu dib u eegis ku sameyso ayaa la siiyaa, laakiin waxaad ka heli doontaa dareen xoog leh heerarka naqshadeynta shirkadda haddii aad awoodo inaad daawato waxyaabaha la midka ah waxaad raadineysay. Tusaale ahaan, ka soo qaad inaad rabto barnaamij raadinaya kabaha ugu fiican dumarka ganacsiga. Shirkadu waa inay awoodaan inay soo bandhigaan barnaamijyo laxiriira ama dukaameysi ama ecommerce - dhibcaha gunno ee khibrada u leh dukaameysiga kabaha.
Ha ilaawin inay sidoo kale u baahan yihiin khibrad sireed u sameynta barmaamijka aad rabto inaad adeegsato si aad u bilowdo barnaamijkaaga. Bilaabashada badankood waxay kubilaabmaan bilaabida barnaamij hal madal ah kadibna kusii fidayaan kan xiga markay ogaadaan in barnaamijku yahay guuleyste dukaanka barnaamijka. Qaado Ciyaarta caanka ah ee loo yaqaan 'Clash of Clans' oo ka socota Supercell taasoo soo saartay $ 2.3 bilyan oo keliya 6 sano gudahood. Ciyaarta markii hore loo bilaabay Apple iOS ka dibna loo ballaariyey Android mar ciyaartu ahayd guul muuqata. Nidaamkani wuxuu yareeyay xaddiga taageerada iyo kor u qaadista loo baahan yahay si loo bilaabo ciyaarta, sidaa darteed barnaamijyada soosaarayaasha iyo hal abuureyaashu waxay diiradda saari karaan hagaajinta adeegsadayaasheeda halkii ay ka ahaan lahaayeen cilad farsamo iyo wax ka beddelka barnaamijyo badan.
Bilaabashada badankood waxay leeyihiin isla qorshaha ciyaarta, shirkadaada horumarineedna waa inay khibrad adag ku yeelataa barmaamijka bartilmaameedka. Shirkadaha horumarinta badanaa waxay leeyihiin kooxo leh khibrad macruufka ah iyo tan Android, laakiin hubi in kooxdaadu ay khubaro ku yihiin barmaamijkaaga bartilmaameedka ah.
Wadashaqeynta iyo wada xiriirka waa furayaasha guusha
Adigu abuure ahaan barnaamij ahaan, waxaad qayb muhiim ah ka tahay dhammaan nidaamka horumarinta barnaamijka. Qaar ka mid ah abuurayaasha barnaamijku waxay u maleynayaan inay fikraddooda ku wareejin karaan shirkad horumarineed, inay cusbooneysiiyaan toddobaad kasta oo ay iska iloobaan inta hartay. Xaqiiqdii, abuuraha waa inuu si dhow ulashaqeeyaa shirkadda saxda ah si loo hubiyo in aragtida si cad loogu caddeeyay horumariyeyaasha.
Waxaan ka fikirnaa nafteena sidii la-hawlgalayaasha macaamiisheena, annaga oo ku hageyna khibradda horumarinta barnaamijka moobiilka. Taas macnaheedu waxa weeye in aynaan ahayn dukaan la dejiyo oo la iska iloobo, sidoo kale; macaamiisheenu waa inay u heellan yihiin kaqeybgalka doodaha shaqeynta, go'aaminta qiyaasta, iyo inbadan. Dabcan waan amaahinaa khibradeena, laakiin macmiilku wuxuu ku lug leeyahay talaabo kasta oo wadada ah. Waa geedi socod iskaashi oo run ah oo loogu talagalay qof kasta oo ku lug leh. Keith Shields, agaasimaha guud, Naqshadeynta
Shirkad kastaa waxay leedahay waddo u gaar ah oo ay wax kaga qabato mashruuca barnaamijka, laakiin kuwa ugu fiican waxay la fariistaan ​​abuuraha, waxay ka caawiyaan inay fikraddooda ugu gudbiyaan warqad, iyo inay si fiican u diiwaangeliyaan qeexitaannada ka hor intaan koodhku bilaabmin. Sababtoo ah kooxda horumarinta ayaa gebi ahaanba ku cusub fikradda, tallaabadani waa mid gebi ahaanba muhiim ah waxayna u baahan tahay iskaashi wanaagsan oo dhexmara labada dhinac.
Horumariyaashaadu waxay ubaahan doonaan waqti ay kuqaabeeyaan oo ay koodhadh ugu sameeyaan mashruuca, laakiin kooxdu waa inay lahaato maamule mashruuc oo lahadli kara hadii aad wax su'aalo ah qabtid.
Ka fikir shirkaddaada horumarinta inay tahay a lammaane iyo qayb kamid ah kooxda oo fikradaada barnaamijka u soo bandhigta nolosha.
Khibrada Isticmaalaha ayaa ka badan sawirada iyo qaabeynta
Muddo sanado ah, isdhaafsiga barnaamijka ayaa lagu soo rogay khibrad isticmaale. Labadaba waa la isweydaarsaday, laakiin baahida loo qabo in loo kala saaro dhinacyo kala duwan oo naqshadeynta ah waxayna abuurtay daraasad cusub. Abuureyaasha barnaamijka cusub badanaa waxay helaan khibrad isticmaale iyo isdhexgalka isticmaalaha. Isku xidhka isticmaalaha ayaa ah badhannada, qaabeynta iyo naqshadeynta la macaamilka isticmaalehaaga. Khibrada isticmaale waa sahlanaanta isticmaalka iyo isdhexgalka dareenka leh ee ay ka kooban yihiin qeybahan.
Tusaale ahaan, waxaad yeelan kartaa batoon gudbiya macluumaadka. Batoonku waa qayb ka mid ah adeegsadaha isticmaalaha. Isticmaalahu si buuxda miyuu fahamsan yahay in badhankan loo isticmaalay in lagu soo gudbiyo macluumaadka si fududna looga heli karo bogga? Tani waa qayb ka mid ah waayo-aragnimada isticmaalaha. Khibradda adeegsadaha ayaa muhiim u ah kaqeybgalka isticmaalaha, taas oo kaxeysa rakibidda iyo sii haynta isticmaalaha.
Shirkadaada horumarinta waa inay lahaato feejignaan cad UI (interface interface) iyo UX (khibrad isticmaale). Waa inay lahaadaan faham cad oo ku saabsan naqshad dareen leh oo ka caawisa isticmaaleyaasha inay si fiican u maraan barnaamijka.
Waxaad u maleyneysaa inaad weydiineyso sidaad ku ogaan lahayd waxaas oo kale? Maaddaama aad haysatid faylalka shirkadda, waxaad ka heli kartaa sida ay ula shaqeeyaan UX adoo ku soo dejinaya barnaamijyadooda doorbidista barta aad rabto inaad bartilmaameed ka dhigato. Android iyo IOS waxay leeyihiin xoogaa nashqado nashqadeed ah, oo nuunnadan ayaa waxaa fahamsan isticmaalayaasha aadka u jecel. Soo dejiso abka, isticmaal astaamihiisa, oo qiimee haddii nashqaddu tahay mid caqli gal ah oo sahlaysa socodka.
Maxaa Dhaca Inta Lagu Jiro Shaqada?
Waxaa jira shirkado ku wareejin doona koodhka ilaha oo u dhaafaya macaamilka si loo ogaado inta kale, laakiin tani waxay shaqeysaa oo keliya haddii abuureha barnaamijku leeyahay gudaha, koox shaqsiyadeed oo horumariyayaal ah ama leh nooc khibrad barnaamij ah. Ikhtiyaar kafiican waa shirkad kugula socodsiinaysa adiga nidaamka dukumiintiyada barnaamijka iyo naqshadeynta si aad udajiso arjiga. U dhaafida macaamilka si uu ula macaamilo geynta kaligiis si buuxda uma dhammeysto mashruuca, horumariyayaashuna waa inay halkaas u joogaan inay ku hagaan macaamilka habka.
Waxaad yeelan doontaa kulan kama dambeys ah halkaasoo lagu soo bandhigayo badeecada la dhammeeyay. Markaad saxeexdo, waxa la joogaa wakhtigii looga wareejin lahaa abka barnaamijka hoyga horumarinta loona wareejin lahaa wax soo saar. Waxaad ubaahantahay xisaabaadka horumariyaha dukaamada waaweyn ee barnaamijka, laakiin shirkad wanaagsan ayaa kaa caawineysa fududeynta dhaqaaqa.
Dukaan kasta oo app ah wuxuu leeyahay shuruudaha u gaarka ah, iyo shirkadda saxda ah ee horumarinta ayaa og waxyaabaha looga baahan yahay gudaha iyo dibedda. Waxay ka caawin karaan abuuraha inuu u diyaar garoobo soo dejinta sida diyaarinta sawirrada suuqgeynta, isku darka mid kasta Analytics nambarka, iyo u soo rarista lambarka isha meesha saxda ah.
Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad wareysi la yeelato oo aad la kulanto dhowr shirkadood oo ah barnaamijyada horumarinta ka hor intaadan helin midka saxda ah. Waa inaad ku raaxeysataa shirkadda aad dooratay oo aad dareento kalsooni inay ku qaban karaan mashruucaaga si xirfad iyo hufnaan leh.
Waxaad ku samayn kartaa adoo weydiinaya su'aalo badan - inta aad uga baahan tahay barnaamijkaaga iyo hababka ay u adeegsadaan in mashruuca lagu qabto. Xitaa waad eegi kartaa dib u eegista haddii ay wax leeyihiin. Waad aadi kartaa degmada ama waxaad ka heli kartaa shirkad khadka tooska ah ka shaqeysa, hadba kan aad doorbideyso illaa inta shaqada si hufan loo maareeyo oo loo daabaco iyada oo dhib yar loo qabo macaamilka sida ugu macquulsan.
Tags: sameeysa barnaamijka mobiladahorumarinta barnaamijka moobiilka